ကြွက်များတွင်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းများကိုထိန်းညှိခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
Socioaffect neuroscience Psychol ။ 2012; 2: 17340 ။
မတ်လ 15, 2012 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3402 / snp.v2i0.17340
Genaro အေ Coria-Avila, DVM, M.Sc, Ph.D*
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသညျလူသားတို့အပါအဝင်များစွာသောလူမှုရေးမျိုးစိတ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူရွေးချယ်အဆက်အသွယ်အဖြစ်အတူတကွသုံးစွဲအချိန်ပိုမိုလေ့လာတွေ့ရှိနှင့်ရွေးချယ်သုတ်ရည်ထိမှဦးဆောင်ကြောင်းပိုးပန်းအပြုအမူညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြွက်များတွင်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အေးစက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS) တစ်ဦးစစ်ကူအဖြစ်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCS) နဲ့အရေးပေါ်အတွက်ဆက်စပ်သည့်အခါသင်ယူဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားတစ်ဦးချင်းတစ်ဦး CS သမုတ်သောမိတ်ဖက်များအတွက်ဦးစားပေးပြသလိမ့်မည်။ တချို့က UCS သူတို့ကြုံတွေ့ကြသောအခါပေါ် မူတည်. ပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအားဖြည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သာအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလအတွင်းမှာ, ထိုလှုံ့ဆော်မှုပွားနှင့်အခြေအနေများကိုဖြစ်လာလူငယ်ကစားနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးများတွင်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်, တွဲပြီး, ပျော့စိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ်ပင် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးခွအေနအေဖက်ဦးစားပေးဖို့စစ်ကူအဖြစ်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်မှု။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပညာရှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းနှင့် pharmacological) နဲ့တစ်ဦးချင်းရဲ့အတှေ့အကွုံ Pavlovian အားဖွငျ့ယူဆရ '' ပင် '' အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု (ဥပမာဌန်နှင့်တိမ်းညွတ်) သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်မဟာဗျူဟာများ (ဥပမာစျမယားသို့မဟုတ်မယားအမြားယူ) ထပ်ရေးနိုင်ပါသည်သောစိတ်ကူးကိုယူရမည် အော်ပရေတာပေါ်ဖြစ်ပေါ်။ တကယ်တော့ဒါဟာဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိရလဒ်များ minimize ကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ပင်အဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်, 'နှင့်နီး' 'ဒါခေါ်ရာတွင် (ဥပမာအပျြောအပါး) ဒါခေါ်' 'အဆုံးစွန်ထက်လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်ရှေးခယျြမှု၏နောက်ဆုံးတွင်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ခန့်မှန်းဖြစ်ပေါ်စေသည် '' အကြောင်းတရားများ (ဥပမာမျိုးဗီဇသို့မဟုတ်မျိုးပွားကြံ့ခိုင်ရေး) ။
keywords: pavlovian, Operations, သင်ယူခြင်း, လိင်, သုတ်ရည်ထိ
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသညျလူသားတို့အပါအဝင်များစွာသောလူမှုရေးမျိုးစိတ်အတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဦးစားပေးလေ့တစ်ဦးချင်းအတူတကွသုံးစွဲပိုပြီးအချိန်နှင့်ရွေးချယ်သုတ်ရည်ထိမှဦးဆောင်ညွှန်ကြားပိုးပန်းအပြုအမူနှင့်အတူရွေးချယ်အဆက်အသွယ်အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် non-သီးသန့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးနှင့်အတူမျိုးစိတ်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ သူများသည်မျိုးစိတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မိတ်ဖက်များအတွက်ဦးစားပေးဖော်ပြစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကသာမိတ်လိုက်၏ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ ထို့ပြင် preference ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်း၏အင်္ဂါရပ်များအဘို့မဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ၏ခြုံငုံ display ကိုအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တဦးတည်းသီးခြားဖက်ဆီသို့သီးသန့်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲဦးစားပေးပြသကြောင်းမျိုးစိတ်များသောအားဖြင့်အဖြစ် monogamous ရည်ညွှန်းကြသည်။ တစ်ဦးက monogamous တစ်ဦးချင်း, တရားရုံးတစ်ခုကအရမ်းရွေးချယ် preference ကိုဖော်ပြရန် copulate, အသိုက်-တည်ဆောက်ခြင်း, အမျိုးအနွယ်ကိုမြှင့်, တိကျတဲ့နှင့်မှတ်မိ features တွေသမုတ်သောတစ်ဦးအထူးသဖြင့်မိတ်ဖက် (Coria-Avila နှင့်အတူပါလိမ့်မယ် 2007) ။ ထို့အပြင်အချို့သုတေသီများတစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီ monogamous မျိုးစိတ်မှထုတ်ပြန်သောနောက်ထပ်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက် (Aragona et al အပါအဝင်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecifics, ငြင်းပယ်ခြင်းအလိုငှါစိတ်ကူးအပေါ်သို့သဘောတူသည်။ , 2006; Carter, DeVries, & Getz, 1995; ဝမ်၊ 1997; Winslow, အလျင်အမြန်, Carter က, Harbaugh, & Insel, 1993).
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများ, ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုများနှင့်သင်ယူမှုတို့အကြားစနစ်တကျ interrelationship ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးလိင်ရင့်ကျက်တစ်ဦးချင်းဆီသို့ဖြစ်ပေါ်ရသောမိတ်ဖက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမျိုးအစား, ဆီသို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်အ sensitivity ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းကိုညွှန်ကြားသောမျိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမွေးဖွားလာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကလေးမွေးဖွားမှာစတင်တိရိစ္ဆာန်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီမှထိတွေ့မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုဦးစားပေးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အစောပိုင်းအဆက်အသွယ်ထိုကဲ့သို့သော Imprint (Batenson အဖြစ်ဖြစ်ရပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, 1978), သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောကာလအတွင်းမှာခံစားခဲ့ရပထမဦးဆုံး conspecific-related လှုံ့ဆော်မှုအနာဂတ်လက်တွဲဖော်ဦးစားပေးညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်တစ်ခုလိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်မိတ်ဖက် preference ကိုအရေးပါကာလအတွင်းမှာအစောပိုင်းသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများနဲ့ပေါင်းစပ်ပင်အချက်များ၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးသစ်ကိုဦးစားပေးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးအပျြောအပါးကိုလိုက်နှင့်နာကျင်မှုမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သစ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များပါစေ။ ထို့ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖက်ဦးစားပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များခန့်မှန်း (သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏အခြားအမျိုးအစားများ) ဖြစ်လာကြပြီလှုံ့ဆော်မှုမှ conditional ဖြစ်လာပေမည်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုခန့်မှန်း၏ရှေ့တော်၌, မိတ်ဖက် preference ကို facilitated စေခြင်းငှါတစ်ခုသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်း၏ရှေ့တော်၌, တစ်ဖက်, ရှောင်ရှား devaluated, ဒါမှမဟုတ်ပင်ဆန္ဒရှိစေခြင်းငှါ, သော်လည်းပိုမိုလွယ်ကူစွာ, ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, '' ပင် '' မိတ်ဖက်ဦးစားပေး (ဥပမာဌန် features တွေအတွက်) သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်မဟာဗျူဟာများ (ဥပမာစျမယားသို့မဟုတ်မယားအမြားယူ) ဆုလာဘ်နှင့်အတူအထူးဆက်နွယ် features တွေအားဖြင့်လူကြီးအတွက်နောက်ထပ်ကျဉ်းသို့မဟုတ်ပင်နောက်ဆက်တွဲအေးစက်ဖြင့်ပြောင်းလဲဖြစ်လာပေမည်။
မိတ်ဖက် ဦး စားပေးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဇီဝဗေဒရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်မျိုးစိတ်တစ်ခု၏ရှင်သန်မှုနှင့်မျိုးဆက်ပွားခြင်းကြံ့ခိုင်မှုအပေါ်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးရခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ မိတ်ဖက်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုလေ့လာပြီး၎င်းတို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာတွယ်တာမှုများကို ဦး တည်နိုင်သည်၊ အချို့သောတိရစ္ဆာန်များတွင်တွဲဆက်မှုနှောင်ကြိုးများနှင့်လူတို့၏ 'အချစ်ဇာတ်လမ်း' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည်စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (Insel & Young, 2001) ။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အခြေစိုက်စခန်းများကိုနားလည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနားလည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြွက်များတွင်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါသင်ယူခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီရည်မှန်းချက်ဆီသို့ငါ Pavlovian နှင့်ဆာ (Operations) အေးစက်၏ယန္တရားများကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီနှစ်ခုသင်ယူမှုယန္တရားများအစောပိုင်း postnatal နှင့်လူငယ်ကာလအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောကာလ, စဉ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာများမှာမည်သို့သက်သေအထောက်အထားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လူကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံကာလအတွင်းပွင့်လင်းကြသည်သို့မဟုတ်ဘယ်လို '' ကအခြားအရေးကြီးသောကာလ 'ကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မည် မှတဆင့် pharmacological ကုသမှု။
မိတ်ဖက် preference ကို၏ Pavlovian အေးစက်
Pavlovian သို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်အေးစက်နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှု (Pavlov အကြားဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းသည်, 1927) ။ ဥပမာအားဖြင့်, သာမန်အခြေအနေများတွင်, ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCSs) ဇီဝကမ္မခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှု (UCRs) ထုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ UCRs တိရစ္ဆာန်၏သဘာဝ repertoire အတွက်ပြီးသားပစ္စုပ္ပန်သူတွေကိုနားမလည်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ UCSs ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးယူဆရ hardwired လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှု (SR) အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအတွက် UCRs ထုတ်ယူသောသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုသို့သော်မည်သည့် UCR ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပေမယ့်စနစ်တကျတစ်ခု UCS နှင့်အတူတဆက်တည်းနှင့်အရေးပေါ်အတွက်တွဲလျှင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထို့နောက် UCR ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့် UCS, အကြားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အသင်းအဖွဲ့စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုသင်ယူခြင်းမပြုမီပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းတုန့်ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့အခါ, တက conditional လှုံ့ဆော်မှု (CS) အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်, တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု conditional တုံ့ပြန်မှု (CR) အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒီဖြစ်ပေါ်သည့်အခါက CS တစ်ဦးအာရုံကြောအဆငျ့မှာ UCS တစ်ကိုယ်စားပြုမှု elicits ယုံကြည်ကြသည်။
Pavlovian အေးစက်မှုသည်လိင်အပြုအမူနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးဖော်ပြမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကအိမ်ထောင်ဖက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုပေါင်းစုံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်တယ်။ ထိုလှုံ့ဆော်မှုအချို့သည် UCS ကဲ့သို့လည်ပတ်နိုင်သည်၊ သို့သော် UCR ကိုအစပျိုးပေးသော်လည်းအခြားသူများစွာမှာမူထိရောက်မှုမရှိပါ 2001) ။ ထိရောက်မှုကိုသဘာဝလှုံ့ဆော်မှု (အထီးကြွက်များတွင်ဆိုလိုသည်မှာအင်္ကျီအရောင်) UCSs (သူ့ထံမှဆိုလိုသည်မှာပွေးညီ intromissions) နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်လာပေမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတဆင့်၎င်း, အလှည့်၌, CRS (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းလှုံ့ဆျောမှု) (Coria-Avila et al ထုတ်ယူနိုင်ပေမည်။ , 2006) ။ UCS (Coria-Avila, Ouimet, Pacheco, Manzo, & Pfaus) နှင့်ဆက်နွှယ်နေလျှင်မူလကကြားနေသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုမရှိသောလှုံ့ဆော်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာပျားရည်အနံ့) ကိုအေးစက်စေနိုင်သည်။ 2005; ကစ်ပင်း၊ ကာainန၊ 2003) ။ ဒါဟာမိတ်ဖက်-related လှုံ့ဆော်မှုများအေးစက်အသက်တာ၏အတော်ကြာကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ကောင်းစွာ-စရိုက်လက္ခဏာတွေအရေးပါကာလအစောပိုင်း postnatal ပတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် pharmacological ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်ကာလများပါဝင်သည်။
အစောပိုင်း postnatal ကာလ
ပင်ဆုလာဘ် (စသည်တို့ကိုဥပမာမိခင်စောင့်ရှောက်မှု, အာဟာရစားသုံးမှု,) နဲ့ Pavlovian အေးစက်မှတဆင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာအသက်တာ၏အစောပိုင်းဝေဖန်ကာလအတွင်းမှာခံစားခဲ့ရသည်ဟုအချို့လှုံ့ဆော်မှု။ အေးစက်၏ဤအမျိုးအစား '' imprinting '' ချေါဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လူကြီး (Batenson အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးထိခိုကျနိုငျ 1978) ။ ဦး နှောက်သည်အသစ်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများပြုလုပ်ရန်အထူးအထိခိုက်မခံသောဤငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်မိဘများ၏မျိုးစိတ်များနှင့်မျိုးစိတ်များ၏လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ရပြီးမျိုးစိတ်များသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆင်တူသောကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများသို့မဟုတ်မျိုးစိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မျိုးကွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရွေးချယ်၍ မိတ်လိုက်ရန်ရွေးချယ်သည့်မျိုးစိတ်ချင်းမိတ်လိုက်ခြင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ။ Assortative မိတ်လိုက်ခြင်းသည် homozygosity ကို strain တွင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမှမျိုးကွဲများကိုတားဆီးသည်။ လူသားများတွင်မျိုးရိုးဗီဇပုံစံ (ဥပမာလူမျိုး၊ မျက်နှာ၊ စသည်)၊ လူမှုရေး (ဥပမာယဉ်ကျေးမှု / ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ) နှင့်လူတစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆင်တူသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာများ (ဥပမာ introversion / extroversion) ကိုပြသည့်အခါမျိုးတွင်မျိုးပွားခြင်းမိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ( Luo & Klohnen 2005; Malina, Selby, Buschang, Aronson, & Little, 1983; Salces, Rebato, & Susanne, 2004), သဘာဝကလူအလားတူသဘောထားများ / manerisms နှင့်အတူအခြားသူများနှင့်လိုက်ဖက်စွာဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေရလဒ်လို။
ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်အထီးသူတို့ကိုနို့တိုက်မိခင်နှင့်ဆက်နွယ်တွေကိုသို့မဟုတ်သူနာပြုကာလနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုဘွားသောအိမ်ထောင်ဖက်များအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြသည့်အထောက်အထားများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်မွေးကင်းစကလေးများကို၎င်းတို့၏ဇီဝဗေဒအမိမှပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။ သူမတွင်ဗိုက်အောင့်တွင်ကြားနေအနံ့ (သံပုရာ) ရှိသည်။ သင့်လျော်သောအချိန်၌ယောက်ျားများအားနို့နှင့်နံ့သာပေါင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်အထိ၊ နံ့သာမျိုးနှင့်မွှေးကြိုင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်တွဲဖက်သည့်အခါ၊ နို့နှင့်နံ့သာမျိုးကိုထပ်မံထိတွေ့ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ရလဒ်များအရမီးဖွားစဉ်အစောပိုင်းကာလများတွင်ယောက်ျားများသည်သံပုရာရနံ့နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့ကြီးပြင်းလာသည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်သံပုရာရနံ့ရနံ့နှင့်အတူတိုတောင်းသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြန့်နှံ့မှုကိုပြသကြသည်။ Fjleion & Blass၊ 1986) ။ ဆိုလိုသည်မှာစမ်းသပ်မှုအစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာခံစားခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းကြားနေအနံ့အနာဂတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စတွင်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားအနံ့ကိုဆောင်သောတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတိုတောင်းသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အထီးကြွက်များတွင် Imprint နှင့်အတူအခြားအစမ်းသပ်ချက်မိတ်ဖက် preference ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပြီးသင်ယူ preference ကိုဤအမျိုးအစားမိခင်အသက်တာ၏အရေးကြီးသောကာလအတွင်းမှာအနွယ်မှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်ခြင်းအလိုငှါသရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံး 10 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းလျက်ကြ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာ olfactory လှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်နိုင်ပါသည်။ Menard, Gelez အားဖြင့်တဦးတည်းလေ့လာမှု, Coria-Avila, Jacubovich နှင့် Pfaus (ခုနှစ်တွင်2006), မွေးကင်းစအထီးခွေးများနေ့တိုင်းကွာ 15 မိဘို့မိမိတို့မိခင်များအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကွာဤအချိန်အတောအတွင်းတစ်တွဲအုပ်စုတွင်ယောက်ျားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလှောင်အိမ်၏ woodchip အိပ်ယာပေါ်ပက်ဖျန်းတဲ့သံပုရာရနံ့ထိတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ကလေဖြတ်သူတို့သံပုရာရနံ့အနံ့ကိုခံ ယူ. သောအချိန်တွင်ဆည်ရဲ့ကိုလျက်တူတဲ့မယ်လို့နိုင်အောင်, မိမိတို့ကျောနှင့်ခေါင်းပေါ်၌သေးငယ်တဲ့ paintbrush နှင့်အတူသူတွေဟာဖျော်ဖြေထိတွေ့နိုင်သောဆွလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတွင်ယောက်ျားထိတွေ့နိုင်သောဆွနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးတည်းရေနှင့်ဖျန်း woodchip အိပ်ယာထိတွေ့ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအသက် 21 ရက်ပေါင်းမှာနို့နှင့်ဘယ်တော့မှပြန်အနံ့ထိတွေ့ခဲ့သည်။2လအတွင်းပြီးနောက်ယောက်ျားကြီးတစ်ပွင့်လင်းသောလယ် ​​(123 × 123 × 46 စင်တီမီတာအခန်းထဲက) တွင်နေရာချခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်း, ရနံ့တဦးတည်းနှင့်ရှိကြသည်တဦးတည်းမှာနှစ်ခုအမျိုးသမီးနှင့်အတူလွတ်လပ်စွာ copulate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ကြောင်း preference ကိုစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရနံ့အမျိုးသမီးမ preference ကို (Menard et al ပြသသော်လည်းအဆိုပါတွဲယောက်ျားတစ်ဦးသိသိသာသာအချိုးအစား, ရနံ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူပထမဦးဆုံး ejaculate တစ် preference ကိုပြသကြောင်းညွှန်ပြ။ , 2006).
အခြားစမ်းသပ်မှုများကပုံနှိပ်ခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောမျိုးစိတ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရအထီးကျန်သောမွေးမြူထားသောသိုးနှင့်ဆိတ်များသည်မွေးစားမိခင် (Kendrick, Hinton, Atkins, Haupt, & Skinner) မှအမျိုးသမီးများထက်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ 1998) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများအစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရလှုံ့ဆော်မှုအနာဂတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းသင်ယူအကျိုးဆက်တိုက်ရိုက်မိတ်ဖက် preference ကိုနိုင်ဖော်ပြသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုကာလသည်အလွန်အရေးကြီးသော်လည်းမွေးကင်းစကာလလွန်ကာလသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တိရိစ္ဆာန်များသည်မိခင်မဟုတ်သောလူမှုရေးဆက်ဆံမှုကိုကစားခြင်းအပြုအမူအားဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွက်များတွင်ဤအပြုအမူသည်ပြိုင်ဘက်၏နှာခေါင်းကို ဦး တည်သည့်ကြမ်းတမ်းရမ်းကားသောကစားခြင်းနှင့် dorsal အဆက်အသွယ်များအကြိမ်ကြိမ်ပါ ၀ င်သည် (Panksepp, Jalowiec, DeEskinazi, & Bishop, 1985) ။ လူမှုပြဇာတ်သည်တိရိစ္ဆာန်များ၏ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရလူမှုရေးအရအထီးကျန်နေသောကြွက်များအားနေ့စဉ်ခဏတာအတွင်းကြမ်းတမ်းရမ်းကားစွာကစားခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောကစားခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုခြင်းသည်ကြောက်စရာကောင်းသော၊ Field & Naylor, 1981) ။ ထို့အပြင်ကစားသောအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်နိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောနှစ်ဖက်အတွက်သာတိရိစ္ဆာန်ငယ်များသည်နေရာကို ဦး စားပေးသည် (Calcagnetti & Schechter, 1992) ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ် opioid agonists နှင့်အတူကုသမှုအပြုအမူ (Panksepp et al များ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုးပွါးကတည်းကလူမှုရေးပြဇာတ်၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ (အဖြစ်အခြားလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ), opioids အားဖြင့် modulated နေကြသည်။ , 1985), naloxone ကဲ့သို့ opioid ရန်အလွယ်တကူယင်း၏ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေသော်လည်း။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှလေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသမီးကြွက်များသည်ယခင်ကလူငယ်ကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောမုန်းတီးမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောယောက်ျားများကိုအပြုအမူရှိသောမိတ်ဖက်ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြခဲ့သည် (Paredes-Ramos, Miquel, Manzo, & Coria-Avila, 2011) ။ ထိုလေ့လာမှုအရ prepubescent အမျိုးသမီးကြွက်များကိုအသက် ၃၁ ရက်တွင်လူမှုရေးအရအထီးကျန်စေခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှု ၁၀ ​​ခုအတွင်းမှာမိနစ် ၃၀ လုံးနေ့စဉ်ကစားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အခြားအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး နှင့် CS အဖြစ်အနံ့ (ဗာဒံသီးသို့မဟုတ်သံပုရာရနံ့) ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောစမ်းသပ်မှုအပြီးတစ်ရက်အလိုတွင်အမျိုးသမီးများအားငယ်ရွယ်ပြီး prepubescent အထီးကြွက်နှစ်ကောင်နှင့်အတူအေးစက်သောကစားဖော်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကြိုက်မှု၊ ရလဒ်အရ almond တွဲဖက်အုပ်စုမှအမျိုးသမီးများသည် almond အထီးကျန်ယောက်ျားများကိုလျစ်လျူရှုကာကစားဖော်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဗာဒံအထီးကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်သံပုရာရည်တွဲအုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးများသည်သံပုရာရနံ့ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အမျိုးသမီးများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၅ ရက်အကြာတွင်၎င်းတို့သည် ovariectomized နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် estradiol နှင့် progesterone တို့နှင့်အတူဟော်မုန်းကိုသုံးသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ကြင်ဖော်ဘက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောလုံးအထီးနှစ်လုံးနှင့်စမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုမှာဗာဒံရနံ့နှင့်သံပုရာရနံ့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ယခင်ကလူငယ်ကစားခြင်းနှင့်တွဲဖက်ထားသောအနံ့ (ဗာဒံသီးနှင့်သံပုရာ) ကိုဆောင်သောယောက်ျားများကိုအလွန်ရွေးချယ်သောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသသည်။ ပိုမိုနှစ်သက်သောအထီးဆီသို့ ဦး တည်ညွှန်ကြားသောပိုမိုတောင်းပန်မှုများ၊ လိင်မှုကိစ္စတောင်းခံခြင်း (hops နှင့် darts အပါအ ၀ င်) တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်ဖိတ်ကြားခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြသည် (Pfaus, Shadiack, Van Soest, Tse, & Molinoff, 2004) ။ အမှန်စင်စစ်မိန်းမများသည်ပထမ ဦး ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်မှုအပါအ ၀ င်၎င်းတို့ထံမှပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအထီးများရှိအမျိုးသားများဆီသို့ပိုမိုတောင်းပန်ခဲ့သည်။ ဤသည် gonadally နဂိုအတိုင်းအမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကသန္ဓေတည်ခြင်းပထမဆုံးအမျိုးသမီးသန္ဓေသားလောင်းသည်အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်မည်သည့်အရာကမျှမပါဝင်ပါက (သန္ဓေတည်ခြင်း ၁၀၀%) ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Coria-Avila, Pfaus, Hernandez, Manzo, & Pacheco, 2004) ။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါလူငယ်ကာလအတွင်းမိတ်ဖက် preference ကို၏အေးစက်ဌန်မိတ်လိုက်နေကြပါတယ်လိမ့်မည်။
postpubertal ကာလသည်စောစောမွေးဖွားသည့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်လူငယ်အဆင့်များထက်အချိန်တိုအတွင်းပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆိုင်ရာအရအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသောတွေ့ကြုံမှုများကိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ကြွက်များအားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ Loteinizing hormone နှင့် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည်ယခင်က copulation နှင့်တွဲဖက်ထားသော conditioned အနံ့ (ဥပမာ wintergreen) (Graham & Desjardins) နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်မြင့်တက်လာခဲ့သည် 1980) ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်သည့် copulatory ဆုလာဘ်ပြည်နယ်နဲ့အသင်းအဖွဲ့တစ်ဦးကြားနေအနံ့တစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်တိရိစ္ဆာန်ပြင်ဆင်တဲ့ conditional neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုထွက်လာပါတယ်နိုင်စွမ်းတဲ့ CS ဖြစ်လာဖို့စေသည်အကြံပြုခြင်း, ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက် estrous အနံ့အဲဒီအောက်ပါထိတွေ့ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။
သုတ်ရည်ထိနဲ့ဆက်စပ်အေးစက်အနံ့ကိုလည်းမိတ်ဖက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Kippin, Talinakis, Chattmann, ဗာသောလမဲ, နှင့် Pfaus (1998) သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လည်ပင်းနဲ့ anogenital ဒေသ၏နောက်ကျောအပေါ်ခြယ်သထားတဲ့ဗာဒံသို့မဟုတ်သံပုရာအနံ့ပေါင်းသင်းယောက်ျားတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုကို (တွဲအုပ်စုတစ်စု) လေ့ကျင့်သင်ကြား။ နောက်ထပ်အုပ်စုတစုကို (unpaired အုပ်စုကို) Kippin et al (ရှိကြသည်အမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulatory စမ်းသပ်မှုတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ , 1998) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းဖွင့်လှစ်ထားသောလယ်ပြင်၌နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး ကိုရရှိကြသည်။ တွဲဖက်အုပ်စုရှိအထီးများသည်အမျိုးသားများ၏ပထမဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုရရန်ရနံ့အမျိုးသမီးများအားရွေးချယ်ထားသည့်အခြေအနေတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး စားပေးမှုကိုပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများအရဤအခြေအနေသည်သုက်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာခြင်းသည် postejaculatory refractory ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည် (Kippin & Pfaus, 2001) ။ ထို့ကြောင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. အထီးကြွက်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခုကြားနေ olfactory လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ Pavlovian အေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထိတွေ့ခြင်းကဦးစားပေးမိတ်ဖက်ရရှိခဲ့သည်။
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ကွဲလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များ၏ ဦး စားပေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန် postejaculatory ကာလသည်လုံလောက်သောကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်ကို အခြေခံ၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်း (Cibrian-Llanderal, Triana-Del Rio, Tecamachaltzi-Silvaran, & Coria-Avila) မှလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် 2011), ကျနော်တို့အထီးကြွက်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်နှင့်တသားတသုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်, ယောက်ျားညင်ညင်သာသာအမျိုးသမီးရဲ့နယ်ပယ်ကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နှင့်တစ်ဦး CS အဖြစ်ဗာဒံသီးရနံ့ကိုဘှားမွငျသောသူတပါးအထီးနှင့်အတူ 1 ဇများအတွက် cohabitate တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကပဲ Kippin နှင့် Pfaus (များ၏လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့, 10 အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်2001) ။ တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စု, ယောက်ျားအမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulating ပြီးနောက်တွဲပြီး 12 ဇတို့အတွက်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်တစ်နေ့မှာယောက်ျားအလားအလာမိတ်ဖက်အဖြစ်နှစ်ခုလုံးအထီး, ရနံ့နှင့်တဦးတည်းရှိကြသည်တဦးတည်းဗာဒံနှင့်အတူအခန်းလိင်တူဆက်ဆံဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆဆန့်ကျင်, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ကို 'အရေးပါတဲ့ကာလ' 'putatively လိင်ကွဲအထီးအတွက်မိတ်ဖက် preference ကို၏လိင်ကွဲပေမယ့်လိင်တူဆက်ဆံသူမဟုတ်အေးစက်ကူညီပံ့ပိုးရန်လုံလောက်သောကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, CS + အထီးတစ်အေးစက်လိင်တူဆက်ဆံ preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့စာရင်းအင်းခေတ်ရေစီးကြောင်း (Non-သိသိသာသာ) ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စမ်းသပ်အုပ်စုတွင်ယောက်ျား၏အကြောင်းကို 40% တောင်ပေါ်မှာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ယောက်ျား၏ 20% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဆှတျဖနျြးအထီးဆီသို့ကြိုးစားနေပြသ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စမ်းသပ်အထီးဆှတျဖနျြးအထီးဆီသို့ကစားအပြုအမူတွေ (dorsal အဆက်အသွယ်များနှင့်ကြမ်းတမ်း-and လိမ့်ကျခြင်းဖြစ်ရပ်များ) ၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပြသ။ ဒါက postejaculatory ကာလအတွင်းအထီးထိတွေ့ conditional ကစားဖက် preference ကိုအတွက်မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူဦးစားပေးများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဖက် preference ကို၏ဆာအေးစက်
လိင်ကရင့်ကျက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ Pavlovian နှင့်ဆာ (Operations) သင်ယူမှုပေါင်းစပ်မှတဆင့်ဖက် preference ကို၏အေးစက်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ဆာသင်ယူမှုတိရစ္ဆာန်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင် (Skinner အပေါ်လုပ်ကိုင်ရန်သိတော့ထားတဲ့အတွက်တုန့်ပြန်-စစ်ကူအရေးပေါ်ဖော်ပြထားတယ်, 1953, 1966) ။ တိရိစ္ဆာန်များသည်အထူးသဖြင့်အားဖြည့်ခြင်း၊ ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်၎င်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နောက်လိုက်သည့်တုန့်ပြန်မှုကိုပြသသောအခါထိုတုန့်ပြန်မှုအကြိမ်အရေအတွက်တိုးများလာပြီးအောင်းနေချိန်ကျဆင်းသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကြွက်များကိုကူးစက်နှုန်းမြန်စေခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များပိုမိုခံစားရနိုင်သည် (Paredes & Alonso, 1997; Paredes & Vazquez, 1999) ။ ထို့ကြောင့်, အမျိုးသမီးကပိုမကြာခဏမြှူဆွယ်တောင်းခံနှင့်သုတ်ရည်ထိ (Coria-Avila et al PACE ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ် CS ထမ်းသောအထီးမိတ်ဖက်ဆီသို့တိုတောင်း latency နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်။ , 2005, 2006) ။ ဤသည်အဖြစ်အပြုသဘောအားကောင်းရည်ညွှန်းတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပြစ်ဒဏ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါပြောင်းပြန်, တုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်အတွင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်အတိုးအတွက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။ လက်ဖြင့်သွေးဆောင် tickling လူငယ်အမျိုးသမီးကြွက်မှအကြိုးဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ဥပမာ, ကလူကြီးများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အကျိုးဆက်အားအမျိုးသမီး tickling နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ CS သမုတ်သောအထီးမိတ်ဖက်ဖို့လျော့နည်းမြှူဆွယ်တောင်းခံပါလိမ့်မယ်, သူ့ကိုနှင့်အတူလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းမည်, နှင့်အခြားဝတ္ထုရရှိနိုင်ပါသည်အထီးပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည် (သိပ်မရှိပါဘူး-Ramos et al ။ , တင်သွင်း) ။ သူ့ကိုရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံအမျိုးသမီးယားခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းစေလျှင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဝတ္ထုအထီးအဘို့အ preference ကိုခိုင်ခံ့စေ၏နိုင်ပါသည်။ ဤသည်အဖြစ်အပျက်သဘောအားဖြည့်ရန်ရည်ညွှန်းတယ်။ ထို့အပြင်လျှင်အမျိုးသမီးအတှေ့အကွုံမိတ်ဖက် preference ကိုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်ပေါင်းစပ်မှတဆင့်ပုံဖော်စေခြင်းငှါဖြစ်လျှင်, ဝတ္ထုအထီးနှင့်အတူဆုချ။
ထို့ကြောင့်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတငျပွနိုငျမှတဆင့် Pavlovian အေးစက်) သို့မဟုတ်တာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးဖျော်ဖြေဖို့သင်ယူ (မှတဆင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် (Pfaus, Kippin, & Centeno, နှင့်အတူ) ကြောင့်ယူဆရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ် ဦး မိတ်ဖက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရရှိရန်အလို့ငှာဆာပ) 2001) ။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်ကိုခံစားရဖို့စွမ်းရည်သုတ်ရည်ထိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပြောင်းလဲယုံကြည်ကြသည်။ သုတ်ရည်ထိခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သူတို့အားလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ရည်ရွယ်စာစားချင်စိတ်ကိုဆာပတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါးသောကွောငျ့ထိုကွောငျ့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေလိင်အကြိုးသတ္တိလည်းရှိတယ်။ ထိုသို့သောစွမ်းဆောင်ရည်ဟာမိတ်ဖက်များ၏တွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အဆင့်ဆင့်ညွှန်ပြနိုင်သည်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များ (Pfaus et al နှင့်အတူ copulate မှအတော်ကြာအလားအလာ conspecifics အကြားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဖက် preference ကိုအခြဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ , 2001).
ရှေ့တော်၌ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ဆုလာဘ်ပြည်နယ်ကကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်နောက်ဆက်တွဲ preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့အရေးပါတဲ့ UCS ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြွက်များတွင် ejaculatory preference ကိုကြွက် (Pfaus et al ၏အခြားမျိုးစိတ်လေ့လာသည့် monogamous အပြုအမူတစ်ခု rudiment ဖြစ်နိုင်သည်အေးစက်ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။ , 2001) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မိတ်လိုက်ခြင်း monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Williams က, Catania, & Carter က) အတွက် pair တစုံနှောင်ကြိုးလွယ်ကူချောမွေ့ 1992), မိတ်လိုက်ခြင်း - သွေးဆောင် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်လိင်ဆုလာဘ်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု (Young & Wang, 2004) ။ တစ် ဦး vole မိတ်ဖက်နှစ်ခုရှေးခယျြတစ်ခု, ယခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုနှင့်ဝတ္ထု၏ရွေးချယ်မှုရှိသည့်အခါ Pair ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တွေ့ရှိရသည်။ bonded vole များသောအားဖြင့်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်း, copulate နှင့်အတူပြန်ထုတ်ပေးဖို့အကျွမ်းတဝင်တ ဦး တည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ အချို့သောအစီရင်ခံစာများအရဒီအပြုအမူသည်သက်တမ်းကြာရှည်နိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများသည်မူရင်းမိတ်ဖက် (Getz, McGuire, Pizzuto, Hofmann, & Frase,) မှအမြဲတမ်းခွဲနေသည့်တိုင်အခြားမိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခဲသည်။ 1993) ။ ဒါဟာကပ်လျက်တည်ရှိ vole ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရေးအဆက်အသွယ်များနှင့်မှုများထပ်တလဲလဲမိတ်လိုက်နေစဉ်ဖက်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်အပြုသဘောအားကောင်း၏ monogamous ဖြစ်နေဆဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရလဒ်အတိုင်း, မိတ်ဖက် (ဥပမာ olfactory လက်မှတ်) ၏တိကျသော features တွေတွေနဲ့နှစ်သက်သောနှင့်လူမှုရေးဆွနဲ့မိတ်လိုက်နေဖြင့်အားဖြည့်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုအေးစက်ကိုထိခိုက်သောအခြားလှုံ့ဆော်မှု
ဒါ့အပြင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းတွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုထက်အခြားနှိုးဆွသောလှုံ့ဆော်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရေကူး၏ရှည်လျားသောကာလကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ဟုယုံကြည်နေကြသည်။ voles (ပုံမှန်အားဖြင့် Bond သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သောအရာ)6ဇ၏ကာလအတွက်တွဲပြီးခွင့်ပြုပြီးတော့ရေကူးခြင်းနှင့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတယ်ဆိုရင်, pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, (Carter ကပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုများပါတယ် 1998; DeVries၊ DeVries၊ တေမန်နှင့်ကာတာ၊ 1996) ။ ယောက်ျားအတွက် corticosterone ၏ထိုး pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအပြုအမူ DeVries et al (စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ corticosteroids) စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သောဟော်မုန်းကနေတဆင့် facilitated ခံရဖို့ယုံကြည်ရသည်။ , 1996) ။ အတိအကျဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝနားမလည်ဖြစ်၏ သို့သော်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက် corticosteroids mesolimbic dopamine အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင်ဆိုတဲ့အချက်ကို (DA) (Der-Avakian et al အပေါ်အခြေခံသည်။ , 2006; Rouge-Pont၊ Marinelli, Le Moal, Simon, & Piazza, 1995), နှင့် DA သည်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးများနှင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖျန်ဖြေသည် (Aragona, Liu, Curtis, Stephan, & Wang, 2003; Aragona et al ။ , 2006; ဝမ်, et al ။ , 1999) ။ အသစ်က pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသားများတွင်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အချို့ကိစ္စဒါချေါစတော့ဟုမ်းရောဂါ (Julich အတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ, 2005; Namnyak et al ။ , 2008), အရာအတွက်ဓားစာခံစာနာဒါမှမဟုတ်ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျပျေါမှာနှောင်ကြိုးဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုနဲ့ကြာချိန်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့သို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါ, တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့သော် preference ကိုသို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မှုကြောင့်အတိအကျယန္တရားများကောင်းစွာ (နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်သဖန်းသီး။ 1).
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရသောကာလ။ အဆိုပါကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းခိုင်မာတဲ့ UCS ထမ်းသောမိတ်ဖက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင့်ဦးနှောက် circuitries ၏အဖှဲ့အစညျး (ဥပမာဦးနှောက် dimorphism) လည်းမရှိ။ ဤသည်ပင် preference ကို ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှုကြောင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဖြစ်ကောင်း et al DA (Pfaus ၏လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပြောင်းလဲနေသော interrelationship ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ , 1990; Pfaus, Damsma, Wenkstern, & Fibiger, 1995), opioids (Agmo & Berenfeld, 1990; Paredes & Vazquez, 1999; ဗန် Furth, Wolterink, & ဗန်ရိ, 1995), oxytocin (OT), နှင့် vasopressin (Bale et al ။ , 2007; Bielsky & Young, 2004; Carmichael et al ။ , 1987; Carter က, ဝီလျံ, Witt, & Insel, 1992; Cushing & Carter က, 2000; ဝမ်၊ 2004) ။ ဤရွေ့ကား neurotransmitter မိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်စိတ်ခံစားမှုအလွှာနေသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ဟောကိန်းထုတ်, မျှော်လင့်ခြင်း, ဆုလာဘ်များနှင့်ယုံကြည်မှု modulate (Berridge & ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Pfaus et al ။ , 1990; Schultz, 2002; Schultz, Apicella, Scarnati, & Ljungberg, 1992; Tauber et al ။ , 2011) ။ ဤ neurotransmitters များလွှတ်ပေးရန်ထိခိုက်စေသောမည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုလည်းဖွယ်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ရန်နှင့်အတူ dopaminergic စနစ် (DA) ၏ထိန်းသိမ်းရေးကြွက်များနှင့် voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်း disrupts; DA agonist တစ်ဦးအနိမ့်ဆေးများ Aragona et al (မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့သော်လည်း။ , 2003; Coria-Avila et al ။ , 2008a; Gingrich, Liu, Cascio, Wang, & Insel, 2000) ။ ဒါဟာ D1- နှင့် D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor agonists monogamous voles အတွက်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းကဏ္ဍ (Aragona et al play ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး D1 agonist သို့မဟုတ် D2 ရန်လုပ်ကွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (Gingrich et al ။ , 2000); ဒါပေမယ့် D2 agonist အလားအလာမိတ်ဖက် (ဝမ် et al နှင့်အတူနာရီအနည်းငယ်များအတွက်ကုသ vole တွဲပြီးလျှင်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ , 1999), မိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးသော preference ကိုဆင်တူ။
D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုလိင်ကွဲမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တိုးမြှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ conditional လိင်တူဆက်ဆံ preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်တစ်ဦး D2 agonist, quinpirole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ quinpirole နှင့်အတူလိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်၏အုပ်စုတစုကုသသူတို့ကို 24 စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအဘို့, တိုင်း4ရက်,3ဇစဉ်အတွင်းတစ်လိင်တူချင်းတစ်ဦးချင်းစီ (cagemate) နဲ့ cohabitate ခွင့်ပြု (Triana-Del ရီယို et al ။ , 2011) ။ quinpirole နှင့်အတူဆကျဆံကြွက်ထိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် UCS နှင့်အတူကပေါင်းသင်းမည်ဟုဒါ cagemate, အ CS အဖြစ်ဗာဒံသီးအနံ့နှင့်အတူဆှတျဖနျြးခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သာဆားလက်ခံရရှိပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာရနံ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ cohabitate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ လေးရက်နောက်ဆုံးအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်, ကြွက်မူးယစ်ဆေး-လွတ်ကြ၏နှင့်သုံးအခန်းခန်း၌လိင်တူဆက်ဆံဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တဦးတည်းအခန်းမှာတော့သူတို့နှင့်အတူ cohabitated ရနံ့မိတ်ဖက်ရှိ၏နှင့်အခြားအခန်းများတွင်, တူညီတဲ့လိင်တစ်ဝတ္ထုမိတ်ဖက်ရှိ၏။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲကြွက်တတိယအခန်း၌ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်အခန်းအကြားလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ရလဒ်ရသောအခါအတူတကွသုံးစွဲအချိန်ပိုမိုပိုမို olfactory စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, သူတို့ကိုအကြားတောင်ပေါ်၏မြင့်မားသောအချိုးအစားနှင့်ပိုပြီး Non-အဆက်အသွယ်စိုက်ထူနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာအဖြစ်အထီး, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီး, (အတူတူလိင်၏) ရနံ့မိတ်ဖက်များအတွက်ဦးစားပေးပြသကြောင်းပြသ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တားဆီးတဲ့ wiremesh နောက်ကွယ်မှအချင်းချင်းထိတွေ့ခဲ့သည်။
Aragona et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ rostral shell ကိုအတွက် D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု (NAc) Aragona et al (monogamous voles အတွက်လိင်ကွဲမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်း။ , ပြသကြ 2003, 2006) ။ ထို့ကြောင့်သူက NAc D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအထီးကြွက်များတွင် conditional လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း modulates နှင့် quinpirole ၏ pharmacological သက်ရောက်မှုအောက်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲတွဲပြီးယောက်ျား cagemate များအတွက် preference ကို crystallize ကကူညီပေးခဲ့ကွောငျးဖွယ်ရှိသည်။
ဒါဟာအစဦးနှောက်ထဲမှာ D1 နှင့် D2 receptors တွေရဲ့အချိုးအစား monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. ကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနားသောကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။ D1 ကဲ့သို့ receptors Aragona et al (ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles ပိုမိုပေါများဖြစ်ကြသည်။ , 2006), နှင့်ကသူတို့မယားအမြားယူမျိုးပွားမဟာဗျူဟာဖြစ်သောတစ်ဦးမျိုးစိတ်အတွက်ဘွန်းမှကာကွယ်ရန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သို့သော်အများအပြားလေ့လာမှုများပင်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. ကြွက်အများအပြားအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ (Coria-Avila et al ပြီးနောက် display ကိုမိတ်ဖက် preference ကိုသင်ယူနိုင်သောပြသကြ။ , 2006; Gmail, Lachapelle, & Pfaus, 2009; Kippin & Pfaus, 2001; သိပ်မရှိပါဘူး-Ramos et al ။ , 2011) ။ သူတို့ monogamous ဖြစ်လာကြဘူးသော်လည်း, ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. ကြွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုလာဘ်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်မိတ်ဖက်ပိုနှစ်သက်ဖို့သင်ယူပါ။ ဒါဟာမိတ်ဖက် preference ကိုအေးစက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. ဦးနှောက်ထဲမှာ D2 ကဲ့သို့ receptors upregulates (quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင်သို့မဟုတ်တွဲပြီး) သုတ်ရည်ထိထပ်ခါတလဲလဲအဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိသရုပ်ပြခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤအရာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုချခြင်း၏အဓိက modulators များဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (Agmo & Berenfeld, 1990; Coria-Avila et al ။ , 2008b; Paredes & Alonso, 1997; Paredes & Martinez, 2001) ကတည်းက opioids ပိတ်ဆို့လိင်အားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း disrupts ။ သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့် medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) (ဗန် Furth, et al အတွက်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။ , 1995) နှင့် ventral tegmental (ရိယာ (VTA) (Balfour, Yu, & Coolen, 2004) ။ MPOA တွင် opioids သည်ဆုလာဘ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ (Garcia-Horsman, Agmo, & Paredes, 2008) နှင့်ယင်း VTA မှာ Balfour et al (mesolimbic DAergic အာရုံခံ၏ disinhibition ထုတ်လုပ်ရန်။ , 2004; ဗန် Furth et al ။ , 1995) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရ opioid agonist morphine ၏ 10 mg / kg ဆေးထိုးဖြင့်ကုသသောအထီးကြွက်များသည်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်တွဲဖက်သောအမျိုးသမီးအတွက်အကြာတွင်တွေ့ဆုံမှုများတွင်အခြေအနေနှင့်ဆိုင်သောသုတ်ရည်လွှတ်မှု ဦး စားပေးမှုကိုပြသခဲ့သည် (John, Bozzini, & Pfaus, 2009) ။ ထိုကဲ့သို့မော်ဖင်းအကိုက်ပမာဏသည်မြင့်မားသောကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုစစ်ဆေးရာတွင်တစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကူးစက်မှုမရှိခြင်းပင်မော်ဖင်းအကိုက်သည်လိင်မှုကိစ္စလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဦး စား ပေး၍ ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး postejaculatory ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သော UCS ကိုတုပနိုင်သည်။ မော်ဖင်းအကိုက်ဖြင့်ကုသခြင်းသည်ကြွက်များတွင်လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းရှိ / မရှိမသေချာသည်။ ထို့အပြင် opioid receptors များသည်တူညီသောအချိုးအစားကို monogamous နှင့် polygamous voles များတွင်တွေ့ရှိရသည်ဟုအစီရင်ခံထားသည် (Insel & Shapiro, 1992), အရာမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အလားတူဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ opioids အေးစက်မိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်လိုအပ်သည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကွောငျ့, ကြာရှည်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းထိုကဲ့သို့သော DA, ညီလေး, ဒါမှမဟုတ် vasopressin (AVP) ကဲ့သို့သောအခြား neurochemicals အပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ monogamous voles များတွင်အမျိုးသမီး, ဥပမာ prelimbic cortex အတွက် (ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများအတွက် stria terminalis, dorsomedial thalamus, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala နှင့် NAc ၏အိပ်ရာနျူကလိယကိုပိုပြီးအချိန်ပို receptors ဖော်ပြ; Insel, 1992) ။ သို့သော်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. အမျိုးသမီးထိုသို့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, ventromedial hypothalamus နှင့် corticomedial amygdala (Young က et al ကဲ့သို့သောအခြားနယ်ပယ်များတွင်ပိုပြီးအချိန်ပို receptors ဖော်ပြ။ , 1997) ။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများထဲမှအနည်းငယ်သည်သာမိတ်ဖက် ဦး စားပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ob ရန်ကြိုကြားကြိုကြား cortex သို့မဟုတ် NAc တွင်လိင်သို့မဟုတ် D2 agonists (Liu & Wang၊ လိင်မှုကိစ္စမှသွေးဆောင်သည့်အရာများ) တွင်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးအသစ်များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ 2003) ။ AVP နှင့် ပတ်သက်၍ monogamous အထီးအဆို့များသည်မယားအများယူအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ventral pallidum တွင်သိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည် (Lim & Young, 2004) ။ AVP ရန်သူအား ventral pallidum သို့ထိုးသွင်းခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာချည်နှောင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည် (Young & Wang, 2004) ။ AVP receptors ၏သောတိုးညွှန်ပြလေ့လာမှုတစ်ခုရှိပါတယ် မှတဆင့် တစ်ဦး monogamous ကနေဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. အထီး vole မှဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်အလွယ်တကူအယ်လ် Lim က et (pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်အဆုံးစွန်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ , 2004).
DA နှင့် DA နှင့် OT နှင့် AVP ကဲ့သို့သော peptides များအကြားစနစ်တကျအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသောကြောင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်တူဆက်ဆံသူကြိုက်နှစ်သက်သောကြိုက်နှစ်သက်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် D2-type receptor agonist + OT ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်းအတူတကွနေထိုင်စဉ် D2 agonist တစ်ခုတည်း (quinpirole) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြွက်များအကြားအေးဆေးတည်ငြိမ်သောလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း quinpirole ကုသမှုကို OT မှ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်ကုသခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုသုံးခုတွင်အမျိုးသမီးများအကြားလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်လာသည် (Cibrian-Llanderal et al ။ , တင်သွင်းခဲ့သည်) ။ ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူများ (ဥပမာ - တောင်းပန်ခြင်းနှင့် hops နှင့် darts) တို့နှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူတကွအသုံးပြုရန်ပိုမိုအချိန်ပေးသည်။ quinpirole + OT ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကကြွက်များတွင် D10-type receptor လုပ်ဆောင်မှုသာမကလိုအပ်သည့် peptide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမိတ်ဖက်အတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တကယ်တော့ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကိုခံစားရဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများအူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့အရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်နေစဉ်မှာဒီအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည် (Becker, Rudick, & Jenkins, 2001; Coria-Avila et al ။ , 2005, 2006()စားပွဲတင် 1).
တချို့ကခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCS) ကြွက်များတွင်စစ်ကူနှင့်အကူအညီနဲ့ခွအေနအေဖက် preference ကိုအဖြစ် function ကို။ တချို့က UCSs အတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေမရှိကြပေ။ အဆိုပါ UCS ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS) သမုတ်သောတစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ...
Inbreeding နှင့် outbreeding
ဒါဟာ inbreeding လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ကတည်းကအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်မိသားစု features တွေအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ် preference ကို, နှစ်လိုဖွယ်မဖြစ်သင့်ကြောင်းစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ အလားတူ genotype နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုမိဘများကမျိုးပွားသည်အထိစဉ်ဆက်မပြတ် inbreeding, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံခြင်းမရှိဘဲမျိုးဆက်မှမျိုးဆက်အဖြစ်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမျိုးဗီဇအပေါ်လွန်သောမလိုချင်တဲ့ genotype သတင်းအချက်အလက်၏ phenotypic စကားရပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint မျိုးပွားရန်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ inbreeding ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မျိုးဗီဇကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အိမ်သူအိမ်သားကြွက်အတွက်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသူတို့တစ်တွေဆင်တူအဓိက histocompatibility ရှုပ်ထွေးသော (MHC) ရှိသည်သောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအဖော်ရှာရှောငျရှားကဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ MHC ဗီဇကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကကူညီမော်လီကျူးများကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးကြောင်းအလားအလာရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းသက်ရှိခွဲခြားထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ပိုပြီးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကြောင်းကိုတစ်ဦးက MHC အကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်ခြားနားသောအရာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိမည်ဖြစ်သည်။ , မိဘထံမှဗီဇအကျိုးဆက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးထက်ပိုနိုင်စွမ်းခုခံအားစနစ်အတွက်ရလဒ်များသောအမျိုးအနွယ်၏ MHC, ပိုသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော။ ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်များကွဲပြားခြားနားသော MHC နှင့်အတူအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ပိုနှစ်သက်ဖို့ပြောင်းလဲကြောင်းစနစ်များရှိသင့်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ အကြောင်း, မိတ်ဖက် preference ကို Non-ဆက်စပ်တစ်ဦးချင်းစီဆီသို့ထက်မလိုချင်တဲ့ genotype ၏အလားအလာသယ်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးရိုးဗီဇအလားတူမိတ်ဖက်ဆီသို့ညွှန်ကြားရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို Imprint မှတဆင့်အတူတူပါပဲ haplotype တစ်ဖက်ဆီသို့ပြောင်းပြန်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား haplotype ၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူမိတ်မှကြွက်၏သဘာဝစိတ်သဘောထား, ပင်မဟုတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ, ဥပမာ, တစ်ဗီဇကွဲပြားခြားနားသော strain တစ်ဦးမွေးစားမိခင်ကမွေးခဲ့အထီးကြွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် strain (Yamazaki et al ၏အမျိုးသမီးဆီသို့တစ်ဦး copulatory preference ကိုပြသ။ , 1988), ပုဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုနှင့်ထိုကြောင့်, အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြုရသော။
မိသားစုအနံ့များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သင်ယူခြင်းသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အား၎င်းင်း၏မိသားစုဝိသေသလက္ခဏာကိုညွှန်ပြပြီး၎င်းသည် (အလားတူမျိုးဗီဇများသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း) နှင့်သူတို့နှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရကြွက်များသည်အခြားသူများ၏ MHC ကို olfactory signal များမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ကြောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော olfactory အသိအမှတ်ပြုမှုသည်အစောပိုင်းအသက်တာ၌ Imprint လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ယူကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်သူတို့သည် MHC မျိုးစုံရှိသည့်မိခင်များနှင့်အတူကြွက်ကလေးငယ်များကိုအပြန်အလှန်အားပေးခဲ့သည်။ ကလေးများအရွယ်ရောက်လာသောအခါမိတ်ဖက်ကြိုက်နှစ်သက်သောအလားတူ MHC နှင့်အတူမွေးစားမိသားစုမှ MHC မျိုးဗီဇများကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည် (Penn & Potts, 1998) ။ Yamazaki et al ၏ရလဒ်များကိုဆင်တူ။ (1988), Penn နဲ့ Potts အမျိုးသမီး MHC-မှီခိုမိသားစု Imprint inbreeding ရှောင်ရှားများအတွက်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအယူအဆထောက်ခံသောမွေးစားမိသားစု, အလားတူ MHC မျိုးဗီဇသယ်ဆောင်ယောက်ျားနှင့်အတူအဖော်ရှာရှောင်ကြဉ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Bateson (1978) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Imprint အကောငျးဆုံး outbreeding နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် inbreeding ထံမှတိရိစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်တားဆီးကြောင်းအကြံပြုသည်။ သူ၏အကကြေညာချက်ဂျပန်ငုံးနှင့်အတူအိမ်ထောင်ဖက်-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ သူသည်ယောက်ျားအတိအကျအရောင် (Batenson နှင့်အတူအမျိုးသမီးမှဆွေမျိုးအဘယ်သူ၏အရောင်ဟာမွေးစားမိခင်ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားခဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူချဉ်းကပ်မှုနှင့်သုတ်ရည်ထိအမြင့်ဆုံးနှုန်းပြသရုပ်ပြ 1978) ။ ဤသည် Imprint ၏ရလဒ်အဖြစ်, အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုကိုအသက်တာ၏အစောပိုင်းနှင့်အရေးပါသောကာလအတွင်းမှာစုစည်းကျွမ်းတဝင်အမှတ်တရများအပေါ်အခြေခံပြီးအကဲဖြတ်သောအနည်းငယ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောဖြစ်ကြောင်းတွေကိုထမ်းသောမိတ်ဖက်, မျက်နှာသို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီအကြံပြုချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Imprint outbreeding အာမခံချက်မှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းဆီသို့ preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကအကျွမ်းတဝင်နှင့်ဖြစ်ကောင်းညီတူညီမျှပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအဆင်ပြေအောင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းနှင့်အတူမွေးမြူအာမခံပါသည်။
လူသားများတွင်အကြောင်းသင်ယူလိင်တူဆက်ဆံဖက် preference ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကြွက်လူကြီးစဉ်အတွင်း conditional လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးနိုင်မညွှန်ပြ။ ဒီဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အမြိုးသမီး D2 + OT တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သော်လည်း, ယောက်ျား, ပိုကောင်း D2-type အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း cohabitate ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်လူသားကိုတိုးချဲ့နှင့်သတိနဲ့အနက်ရမည်ဖြစ်သည်ဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိမသိနိုင်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအဖြစ်တချို့ကမူးယစ်ဆေးအမှန်ပင်လူသားတွေအတွက် DA လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ D2-type အမျိုးအစား receptors အပေါ်မဟုတ်ဘဲအားလုံး DA receptors အပေါ်တိုက်ရိုက်ပြုမူကြပါဘူး။ ဤသည်ကို Activation voles အသစ်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်ရာ D1-type အမျိုးအစား, ပါဝင်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာနာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအထီး voles ဖြစ်ကောင်း D1-type အမျိုးအစား receptors (လျူ et al တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်တက်စည်းမျဉ်းကြောင့်၎င်း, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 2010).
DA နှင့် OT agonists အားဖြင့် facilitated conditional လိင်တူဆက်ဆံဖက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလွယ်တကူသဘာဝဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့သူကသာဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုတိုက်ရိုက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး fixed သို့မဟုတ် hardwired မဟုတ်ဘဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကာသက်ရှိတွေ့ဆုံကြောင်းသစ်ကိုပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ချက်နဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း neurocircuitries ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ခိုင်မာတဲ့ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကိုရရှိရန်တိရစ္ဆာန်များကို ပြင်ဆင်. ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဝတ္ထုတစ်ဦးချင်းဆီသို့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမိတ်ဖက် preference ကိုပု UCS-UCR အသင်းအဖွဲ့များ၏ခြွင်းချက်မရှိရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လည်းသင်ယူမှုနှင့် CS-CR အသင်းအဖွဲ့များ၏ရလဒ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အစောပိုင်း postnatal ရက်သတ္တပတ်, ပွား, လူငယ်ကာလသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်များလွန်းအလွယ်တကူကြွက်များ၏အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်အတွက်လိင်ကွဲမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ဖြစ်ကောင်းလူသားတွေအတွက်နိုငျသညျ။ အဆိုပါကြွက်အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးကလိင်တူချင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအချို့သောအကြိုးအသင်းအဖွဲ့များလိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဒီလူမှာသရုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤအမှု၌, monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. မျိုးစိတ်နှင့်လိင်ကွဲသို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံဖက် preference ကိုရှိသူများအတွက် activated ဘုံဦးနှောက်ဒေသများနှင့် neurochemical သို့မဟုတ် endocrine စနစ်များကိုရှာဖွေရာတွင်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်မဟာဗျူဟာမှာမတူကွဲပြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသင့်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပညာရှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် pharmacological ဆိုလိုသည်မှာ) ဆုလာဘ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းရဲ့အတှေ့အကွုံ Pavlovian နှင့်အော်ပရေတာပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖွငျ့ယူဆရ '' ပင် '' အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု (ဥပမာဌန်) သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်မဟာဗျူဟာများ (ဥပမာစျမယားသို့မဟုတ်မယားအမြားယူ) ထပ်ရေးနိုင်ပါသည်သောစိတ်ကူးကိုယူရမယ် ။ တကယ်တော့ဒါဟာဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုသင်ယူဆန္ဒရှိရလဒ်များ minimize လုပ်ဖို့လည်းပင် (နှင့်ဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်အခြေခံ) ဖြစ်ပါသည်, '' နှင့်နီး '' ဒါခေါ်ရာတွင်လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်ရှေးခယျြမှု၏ (ဥပမာအပျော်အပါး) နောက်ဆုံးမှာပိုပြီးအစွမ်းထက်ခန့်မှန်းဖြစ်ပေါ်စေသည် ဒါခေါ် '' အဆုံးစွန် '' အကြောင်းတရားများ (ဥပမာမျိုးဗီဇသို့မဟုတ်မျိုးပွားကြံ့ခိုင်ရေး) ထက်။
စာရေးသူဟာသူတို့ရဲ့ခက်ခဲများအတွက်အသုံးဝင်သောဆွေးနွေးဘို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုဖွစျတဲ့တာ Cibrian-Llanderal, Pedro သိပ်မရှိပါဘူး-Ramos, ရိုဒရီဂို Triana-Del ရီယိုနှင့်ဖေလဇ်မင်း Montero-Dominguez မှဒေါက်တာဂျင်မ် Pfaus နှင့်ဒေါက်တာလာရီဂျေ Young ကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် အလုပ်နှင့်၎င်းတို့၏သုတေသနစီမံကိန်းများဖို့ကတိကဝတ်။
Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1990; 104 (1): 177-182 ။ [PubMed]
နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23 (8): 3483-3490 ။ [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, et al ။ နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006;9(1): 133-139 ။ [PubMed]
Bale KL, ဗန် Westerhuyzen ဂျာ Lewis က-Reese အေဒီ, Grotte ND, Lanter ဂျာ Carter က CS oxytocin အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-Bond နှင့် alloparental စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ထိုး-မှီခိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 52 (2): 274-279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Balfour ME, ယု L ကို, Coolen LM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29 (4): 718-730 ။ [PubMed]
Batenson P. အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှု။ ခုနှစ်တွင်: Hutchinson JB, အယ်ဒီတာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝပြဌာန်းခွင့်။ Chichester: John Wiley & Sons; 1978 စစ။ 29-53 ။
Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21 (9): 3236-3241 ။ [PubMed]
Beery AK, Zucker ဗြဲ oxytocin နှင့်အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အတွက်လိင်တူချင်းလူမှုရေးအပြုအမူ။ neuroscience ။ 2010; 169 (2): 665-673 ။ [PubMed]
Hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက်သုတေသန။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ။ 1998; 28 (3): 309-369 ။ [PubMed]
Bielsky လျှင်, Young က LJ oxytocin, vasopressin နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု။ Peptides ။ 2004; 25 (9): 1565-1574 ။ [PubMed]
Calcagnetti DJ သမား, Schechter MD ရာဌာနအေးစက်လူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏အကြိုးအသှငျအပွငျဖော်ပြသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1992; 51 (4): 667-672 ။ [PubMed]
Carmichael က MS, Humbert R ကို, Dixen J ကို, Palmisano, G, Greenleaf W က, လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန် Davidson JM Plasma oxytocin တိုး။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ်။ 1987; 64 (1): 27-31 ။ [PubMed]
လူမှုရေးပူးတွဲမှုနှင့်ချစ်ခြင်းအပေါ် Carter က CS Neuroendocrine အမြင်များ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1998; 23 (8): 779-818 ။ [PubMed]
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ဇီဝနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏အလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1995; 19 (2): 303-314 ။ [PubMed]
Carter က CS, Williams က JR, Witt DM, Insel TR oxytocin နှင့်လူမှုရေး Bond ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏နယူးယောက်၏ရာဇဝင်။ 1992; 652: 204-211 ။ [PubMed]
Cibrian-Llanderal IL, Rosas-Aguilar V, Triana-Del Rio R, Perez-Estudillo CA, Manzo J, Garcia LI, Coria-Avila GA ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လိင်တူချင်းလက်တွဲဖော် ဦး စားပေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - တိုးချဲ့ D2-type receptor နှင့် oxytocin လုပ်ဆောင်မှုများအတွင်းပေါင်းစပ်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆေးခန်း၊ ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။
Cibrian-Llanderal အိုင်တီ, Triana-Del ရီယို R ကို, Tecamachaltzi-Silvaran M က, အထီးကြွက်များတွင် Coria-Avila GA ကိုက်လိင်တူဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူ; 2011 ။ ပိုစတာ session တစ်ခုအပြုအမူ Neuroendocrinology, Queretaro, မက္ကဆီကိုများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Coria-Avila GA အပြုအမူနှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် conditional မိတ်ဖက် preference ကို၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ Montreal မှာ Quebec, ကနေဒါ: ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရသေးသောပါရဂူစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။ စိတ်ပညာဌာန, Concordia တက္ကသိုလ်မှ; 2007 ။
Coria-Avila GA, Pfaus JG, Cibrian-Llanderal အိုင်တီ, Tecamachaltzi-Silvaran M က, et al Triana-Del ရီယို R ကို, Montero-Domínguez F ကို။ တစ်ဦး comportarse sexualmente aprender Cómo။ E-Neurobiologia ။ 2010; 1 (1)
Coria-Avila GA, Gavrila လေး, Boulard B, Charron N ကို, Stanley, G, အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် conditional မိတ်ဖက် preference ကို၏ Pfaus JG Neurochemical အခြေခံ: II ကို။ flupenthixol အားဖြင့်နှောင့်အယှက်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008a; 122 (2): 396-406 ။ [PubMed]
Coria-Avila GA, ဂျုံးစ် SL, ရှောလမုန်အီး, Gavrila လေး, ဂျော်ဒန် GJ, Pfaus JG ယောက်ျားကို strain အဘို့အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အေးစက်မိတ်ဖက် preference ကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2006; 88 (4-5): 529-537 ။ [PubMed]
Coria-Avila GA, Ouimet AJ, Pacheco P ကို, Manzo J ကို, Pfaus JG Olfactory အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အေးစက်မိတ်ဖက် preference ကို။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 119 (3): 716-725 ။ [PubMed]
Coria-Avila GA, Pfaus JG, ဟာနန်ဒက်ဇ် ME, Manzo J ကို, သုက်အကြား Pacheco P. Timing ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းအောင်မြင်မှုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 80 (5): 733-737 ။ [PubMed]
et al Coria-Avila GA, ရှောလမုန်အီး, Vargas eb, Lemme ငါရိုင်ယန် R ကို, Menard S က။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် conditional မိတ်ဖက် preference ကို၏ Neurochemical အခြေခံ: naloxone အားဖြင့်ဗြဲ Disruption ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008b; 122 (2): 385-395 ။ [PubMed]
ကုရှ BS, အမျိုးသမီးအတွက် oxytocin တိုးဖက်ဦးစားပေး၏ Carter က CS Peripheral ပဲမျိုးစုံ, ဒါပေမယ့်မရအထီး, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2000; 37 (1): 49-56 ။ [PubMed]
der-Avakian တစ်ဦးက, Bland ST, Schmid MJ, Watkins LR, Spencer RL, Maier SF နျူကလိယ၏မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အလားအလာအတွက် glucocorticoids များ၏အခန်းကဏ္ဍမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ shell ကို dopamine နဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကိုတုံ့ပြန်မှု accumbens ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2006; 31 (5): 653-663 ။ [PubMed]
DeVries AC အ, လူမှုရေးဦးစားပေးအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု DeVries ကို MB, Taymans SE, Carter က CS အဆိုပါသက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိင် dimorphic ဖြစ်ကြသည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1996; 93 (21): 11980-11984 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Einon DF, Humphrey AP, Chivers သည် SM, ဖျော်ဖြေမှုက S, Naylor V. အထီးကျန်ထားခြင်းအမြဲတမ်းကြွက်များ၏အမူအကျင့်တို့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဒါပေမယ့်မပေးမောက်, တက်လာတယ်,, ဒါမှမဟုတ် guinea ဝက်ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1981; 14 (4): 343-355 ။ [PubMed]
Fillion တီဂျေ, နို့စို့အနံ့နှင့်အတူ Blass EM မွေးကင်းစကလေးများအတွေ့အကြုံကိုအထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆုံးဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ။ 1986; 231 (4739): 729-731 ။ [PubMed]
Garcia က-Horsman SP, Agmo တစ်ဦးက, naloxone ၏သိပ်မရှိပါဘူး RG ပြုတ်ရည်ဟာ medial preoptic ဧရိယာသည် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယနှင့် PACE မိတ်လိုက်အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင် amygdala ပိတ်ပင်တားဆီးမှု conditional ရာအရပျ preference ကိုသို့။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2008; 54 (5): 709-716 ။ [PubMed]
Getz ll, McGuire B, Pizzuto T က, Hofmann J ကို, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏ Frase ခလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး, Microtus ochrogaster ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ဂျာနယ်။ 1993; 74: 44-58 ။
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000; 114 (1): 173-183 ။ [PubMed]
ဂရေဟမ် JM, Desjardins C. နျ Classical အေးစက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်မျှော် luteinizing ဟော်မုန်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း Secret ၏ induction ။ သိပ္ပံ။ 1980; 210 (4473): 1039-1041 ။ [PubMed]
Insel TR oxytocin - ဆက်နွယ်မှုတစ်ခု neuropeptide: အမူအကျင့်ကနေသက်သေအထောက်အထားများ, အဲဒီ receptor autoradiographic နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1992; 17 (1): 3-35 ။ [PubMed]
Insel TR, Shapiro LE oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1992; 89 (13): 5981-5985 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Insel TR, Young က LJ ပူးတွဲမှု၏ neurobiology ။ သဘာဝတရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ neuroscience ။ 2001;2(2): 129-136 ။ [PubMed]
အစ္စမေးလ် N ကို, Gelez H ကို, Lachapelle ငါ Pfaus JG PACE အခြေအနေများယောက်ျားကြွက်အတွက်အကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီးများအတွက်အေးစက် ejaculatory preference ကိုအထောက်အကူပြု။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2009; 96 (2): 201-208 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ် SL, Bozzini P ကို, Pfaus JG မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်တစ်အေးစက် ejaculatory preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု potentiates; neuroscience အစည်းအဝေးအစီအစဉျ; အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2009 ။ အွန်လိုင်း။
Julich အက်စ်စတော့ဟုမ်းရောဂါနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ ကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်။ 2005; 14 (3): 107-129 ။ [PubMed]
Kendrick KM, Hinton MR, Atkins K ကို Haupt MA, Skinner JD မိခင်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ သဘာဝ။ 1998; 395 (6699): 229-230 ။ [PubMed]
Kippin TE ကာဣန SW, Pfaus JG Estrous အနံ့နှင့်လိင်အေးစက်ကြားနေအနံ့ယောက်ျားကြွက်များတွင်သီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်။ neuroscience ။ 2003; 117 (4): 971-979 ။ [PubMed]
Kippin TE, Pfaus JG ယောက်ျားကြွက်များတွင် olfactory conditional ejaculatory ဦးစားပေး၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ချွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏ဗြဲသဘာဝတရား။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 73 (4): 457-469 ။ [PubMed]
Kippin TE, Talinakis အီး, Chattmann L ကို, ဗာသောလမဲက S, ယောက်ျားကြွက်နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ (Rattus norvegicus) ဂျာနယ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Pfaus JG Olfactory အေးစက်။ 1998; 112 (4): 389-399 ။
Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက်လူငယ် LJ Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004; 429 (6993): 754-757 ။ [PubMed]
Lim က MM သည် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံလူငယ် LJ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004; 125 (1): 35-45 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, Mazei-Robison M က, et al ။ နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2010; 107 (3): 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လျူ Y ကို, ဝမ် ZX နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121 (3): 537-544 ။ [PubMed]
Luo အဘိဓါန် S က, ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံအတွက် Klohnen EC အဌန်မိတ်လိုက်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို: စုံတွဲတစ်တွဲဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2005; 88 (2): 304-326 ။ [PubMed]
Malina RM, Selby HA, Buschang PH သည်, Aronson WL, Little က BB ဌန် Oaxaca, မက္ကစီကိုတစ်ဦး Zapotec အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် phenotypic ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်အဖော်ရှာ။ Biosocial သိပ္ပံဂျာနယ်။ 1983; 15 (3): 273-280 ။ [PubMed]
Menard S က, Gelez H ကို, Coria-Avila GA, Jacubovich M က, အထီးကြွက်များတွင်နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုအပေါ် ioning မွေးကင်းစကလေးများ olfactory အခြေအနေ Pfaus JG သက်ရောက်မှု; 2006 ။ ပိုစတာ session တစ်ခုအပြုအမူ Neuroendocrinology, Pittsburgh, PE များအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Namnyak M က, Tufton N ကို, Szekely R ကို, သေးကြောင်း M က, Worboys S က, Sampson EL စတော့ဟုမ်းရောဂါ ': စိတ်ရောဂါရောဂါသို့မဟုတ်မြို့ပြဒဏ္ဍာရီ? Acta Psychiatrica Scandinavica ။ 2008; 117 (1): 4-11 ။ [PubMed]
Panksepp J ကို, Jalowiec J ကို, DeEskinazi အပြည်ပြည်သွား, ဆရာတော် P. Opiates နှင့်လူငယ်ကြွက်များတွင်လွှမ်းမိုးကစား။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1985; 99 (3): 441-453 ။ [PubMed]
Parada M က, Abdul-Ahad က F, Censi S က, Sparks L ကို, Pfaus JG ဆက်စပ်ကြွက်များတွင်လိင်-အေးစက်မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင် clitoral ဆွများ၏စွမ်းရည်ကိုပွောငျးလဲ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2011; 59: 520-527 ။ [PubMed]
အမျိုးသမီးများကသိပ်မရှိပါဘူး RG, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Alonso အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ပွေးညီ) conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1997; 111 (1): 123-128 ။ [PubMed]
သိပ်မရှိပါဘူး RG, Martinez ဗြဲ Naloxone လုပ်ကွက်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် preference ကိုအေးစက်ထားပါ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2001; 115 (6): 1363-1367 ။ [PubMed]
အကြောင်းကိုလိင်နဲ့တူအမျိုးသမီးကြွက်ပြုပါဘယ်အရာကိုသိပ်မရှိပါဘူး RG, Vazquez ခ? ပွေးညီမိတ်လိုက်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 105 (1): 117-127 ။ [PubMed]
သိပ်မရှိပါဘူး-Ramos P ကို, Miquel M က, Manzo J ကို, Coria-Avila GA Juvenile ကစားအခြေအနေများအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2011; 104: 1016-1023 ။ [PubMed]
Paredes-Ramos P, Miquel M, Manzo J, Pfaus JG, López-Meraz ML, Coria-Avila GA အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက်ရည်းစားဖြစ်သော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်အခြေအနေများလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းခဲ့သည် - ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ [PubMed]
Pavlov ဗြဲအေးစက်တုံ့ပြန်မှု။ အောက်စဖို့ဒ: တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း; 1927 ။
Penn: D Cross-Foster တို့ကပြောင်းပြန် Potts ဒဗလျူ MHC-disassortative မိတ်လိုက်ဦးစားပေး။ ဇီဝသိပ္ပံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1998; 265 (1403): 1299-1306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, Wenkstern DG, Blaha CD ကို, Phillips က AG က, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1990; 530 (2): 345-348 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Damsma, G, Wenkstern: D, Fibiger HC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဟာနျူကလိယ accumbens နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏ striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1995; 693 (1-2): 21-30 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Kippin TE, Centeno အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 40 (2): 291-321 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Shadiack တစ်ဦးက, ဗန် Soest T က, စီ M ကတစ် melanocortin အဲဒီ receptor agonist အားဖြင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်၏ Molinoff P. ရွေးချယ်ပံ့ပိုးကူညီ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004; 101 (27): 10201-10204 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rouge-ပိုတငျးက F, Marinelli M က, က Le Moal က M ရှိမုန် H ကို, Piazza PV စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ထိခိုက်စေ glucocorticoids ။ II ကို။ ကိုကင်းများကသွေးဆောင် extracellular dopamine အတွက်တိုး၏အသိမြှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် corticosterone Secret ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1995; 15 (11): 7189-7195 ။ [PubMed]
Salces ငါ Rebato အီး, phenotypic နှင့်အဘိဓါန် Basque- တိုင်းပြည် Biosocial သိပ္ပံ (စပိန်) ဂျာနယ်ကနေစုံတွဲများအတွက် anthropometric နှင့်ဇီဝကမ္မစရိုက်များများအတွက်လူမှုရေးဌန်မိတ်လိုက်၏ Susanne C. အထောက်အထား။ 2004; 36 (2): 235-250 ။ [PubMed]
Schultz W က, Apicella P ကို, Scarnati အီး, ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ခြင်းမှဆက်စပ်မျောက် ventral striatum အတွက် Ljungberg တီအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1992; 12 (12): 4595-4610 ။ [PubMed]
တစ်ဖွဲ့လုံးကစိတ်ပညာမှအပြုအမူတစ်ခုစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအချို့သည်ပံ့ပိုးမှုများကို BF Skinner ။ အမေရိကန်စိတျပညာ။ 1953; 8: 69-78 ။
Skinner BF အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကဘာလဲ? အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1966;9(3): 213-218 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tauber M က, Mantoulan ကို C, Copet P ကို, Jauregui J ကို, Demeer, G, Diene, G, et al ။ oxytocin ကိုအခြားသူများအတွက်ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Prader-Willis syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်နှောင့်အယှက်အပြုအမူတွေကိုလျော့ချဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်: 24 လူနာတစ်ဦးကိုကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ရှားပါးရောဂါ၏ Orphanet ဂျာနယ်။ 2011;6(1): 47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Triana-Del ရီယို R ကို, Montero-Dominguez က F, Cibrian-Llanderal T က, et al Tecamachaltzi-Silvaran ကို MB, Garcia က LI, Manzo J ကို။ quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင်လိင်တူချင်းတွဲပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက်တစ်အေးစက်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2011; 99 (4): 604-613 ။ [PubMed]
ဗန် Furth WR, Wolterink, G, ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဗန် Ree JM Regulation: ဦးနှောက်ကို opioids နှင့် dopamine ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ။ 1995; 21 (2): 162-184 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Hulihan တီဂျေ, Insel TR လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1997; 767 (2): 321-332 ။ [PubMed]
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း: pair တစုံ Bond တစ်ယန္တရား? အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999; 113 (3): 602-611 ။ [PubMed]
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 1992; 26 (3): 339-349 ။ [PubMed]
Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365 (6446): 545-548 ။ [PubMed]
Yamazaki K ကို Beauchamp GK, Kupniewski: D, Bard J ကိုသောမတ်စ်က L, Boys EA ၏မိသားစု Imprint H-2 ရွေးချယ်မိတ်လိုက်ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ။ 1988; 240 (4857): 1331-1332 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004;7(10): 1048-1054 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Winslow JT, et al ဝမ် Z ကို, Gingrich B, Guo မေး, Matzuk MM ။ oxytocin, မိခင်အပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်မှု: neuroendocrinology ဖို့ချဉ်းကပ်မှုပစ်မှတ်ထားဗီဇ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 1997; 31 (3): 221-231 ။ [PubMed]